Faritra Nizhny Novgorod - magazine "Potato System"
Tena Label Faritra Nizhny Novgorod
Label: Faritra Nizhny Novgorod
Ny faritra Nizhny Novgorod dia manidy ny telo voalohany amin'ny fanangonana ovy any Rosia
Vita ny fiotazana ovy tany amin’ny faritr’i Nizhny Novgorod. 14,3 arivo hektara no natokana ho an'ity voly ity any amin'ny faritra - 7% fanampiny, ...
Tany amin'ny faritr'i Nizhny Novgorod, nisy fitondrana vonjy taitra nambara noho ny fahaverezan'ny vokatra
Nanomboka ny 23 septambra lasa teo dia nisy fitondrana vonjy taitra nampidirina tao amin'ny faritra Nizhny Novgorod noho ny fahaverezan'ny vokatra. Ny governora Gleb Nikitin dia nanao sonia didim-pitondrana mifandraika amin'izany, ao ...
Nasiana tsipika fanamafisana legioma sy voankazo lalina tao amin'ny faritra Nizhny Novgorod
Andalana vaovao ho an'ny hatsiaka be ny legioma sy voaroy no napetraka tao amin'ny distrikan'i Krasnobakovsky miorina amin'ny tranoben'ny fambolena Vetluga. Ny tetikasa fampiasam-bola dia ...
Ny faritra Nizhny Novgorod dia mikasa ny hahazo ovy 400 taonina amin'ny 2021
Ny lahasa ho an'ny fampandrosoana ny fambolena indostrialy any amin'ny faritra Nizhny Novgorod ho an'ny 2021 dia noresahina tamin'ny fivorian'ny filankevitry ny minisiteran'ny fambolena sy ny loharanon-tsakafo ...
Nandritra izay taona lasa izay, LLC Aksentis dia iray amin'ireo mpitarika amin'ny famokarana ovy voa ao amin'ny Federasiona Rosiana. Miasa ny orinasa ...
"Ovy Arzamas" dia mandray anjara amin'ny fifaninanam-pirenena "Tastes of Russia"
Notaterin'ny minisiteran'ny Fambolena sy ny loharanon-tsakafo any amin'ny Faritra Nizhny Novgorod izany. "Nanomboka tamin'ny taona 2000 ny tantarany, rehefa nitombo ny ovy ...
Ny agarians an'ny faritra Nizhny Novgorod dia nahazo fanampiana 140 tapitrisa roubles ho fampandrosoana ny fanajariana ny tany
Tamin'ny taona 2020, ireo mpamokatra fambolena any amin'ny faritra Nizhny Novgorod dia nahazo fanampiana 140 tapitrisa roubles an'ny federaly sy isam-paritra ho fampandrosoana ny fanajariana ny tany, izay fahatelo ...
Ovy 400 XNUMX taonina mahery no nojinjaina tany amin'ny faritr'i Nizhny Novgorod
Manakaiky ny fahavitana ny fijinjana any amin'ny faritra Nizhny Novgorod. Na eo aza ny fahasahiranana rehetra amin'ny fotoam-pambolena dia nahavita vokatra tsara ny tantsaha. “Mbola ny valiny farany ...
Ny fanangonam-bokatra ovyubers ao amin'ny sampana Nizhny Novgorod ao amin'ny Institution Federal Budget Budget "Rosselkhoztsentr"
Taorian'ny fijinjana, ny mpiasan'ny sampana dia nanao fanasoketana, fanitsiana ary fanamarihana ny vokatra azo. Vokatr'izany, mavesatra ovy maherin'ny 230 isan-karazany ...
Ny Agrarians of the Republic of Mari El dia nanomboka nanangana "mofo faharoa".
Ny aretina lehibe indrindra amin'ny zavamaniry izay nanimba ny fambolena tamin'ny taona 2020